Stadium "Gazovik" (Orenburg): kabusha umbono besikhathi eside?
amaqembu amaningi Russian Premier League ube yesimanje ekhaya nkundla. Eziningi zalezi zinkundla kukhona kuphela eliphezulu enkundleni yomdlalo webhola, kodwa sente ncono tinhlelo tekwetfulwa emphakathini. Futhi Orenburg sikhathi, cishe, kumile. Njengoba umsebenzi wokwakha kabusha le nkundla kuyosiza izakhamuzi zedolobha ukujabulela football zanamuhla?
Umlando enkundla "Gazovik" (Orenburg)
Umlando yezemidlalo izindawo kufanele uqale nge inhloso ubonakaliswe. Ngo-1976, iqembu kusukela emzini Orenburg oluvela kumephu football yeRussia. Isihloko, okuyinto wafumana imiyalezo endalweni yakhe - "Gazovik". impumelelo Omkhulu ekupheleni kwekhulu leminyaka elidlule, leli qembu akakakujulukeli. Kodwa isidingo kwakusabalulekile. Futhi kobuholi edolobheni, kanye nomphakathi football iqala ukwakha Orenburg football umkhakha.
Kwanqunywa ukwakha enkundleni yebhola lezinyawo kuleli dolobha. Ngo-2001 yasungulwa ngonyaka olandelayo eyalwa. Ngokwemvelo, uthola igama elifanelekayo - enkundleni "Gazovik" (Orenburg, Russia). Yakhiwa football inkundla namaculo eziyisithupha wezemidlalo. Wayefanele zezitsha ezine kanye yemvelo utshani otshanini. Kusukela ngaleso sikhathi, i-club edolobheni football udlala emzini wabo imidlalo kule enkundleni. Ukwakhiwa kabusha kwezindawo zemidlalo iqala eminyakeni nje emithathu. On the yokufakelwa Turf inkundla kuvela.
Esikhathini esizayo, le nkundla "Gazovik" (Orenburg), umsebenzi wokuvuselela izakhiwo zazo kwakudingekile ngakho, aluthola nesakhiwo samahhovisi. Futhi ngo-2006 ayethunywe. Lokho, ngaphezu ehhovisi "Gazovik", wawusegunjini lesi sakhiwo? Lapha inikeza amakamelo eydijithali abadlali, ukuzilibazisa isikhungo kanye nezinye izikhungo eziningi. Ukulandela kabusha kwadingeka ngilinde isikhathi eside iminyaka emithathu. Yisikhathi ezidingekayo for ukugcwaliseka isidingo sokuvuselelwa ukubuthelela imali imisebenzi eyengeziwe.
Futhi ngo-2009, le nkundla "Gazovik" (Orenburg), ogama yokwakha kabusha ohlelelwe, izuza kulungiselelwa emkhakheni bafudumale system. Iphinde ithengwe futhi efakwe a iBhodi ezinkulu electronic. Kwakuphakathi nalesi sikhathi iqembu football "Gazovik" buthola umfutho futhi ukuzilungisa for ukukhululwa in the division lokuqala football Russian. Futhi sekuphele unyaka owodwa kamuva intuthuko. I "Gazovik" Orenburg okokuqala emlandweni umuzi uwa ku phiko lokuqala football kazwelonke.
Hambisa phezulu isitebhisi football nokwenza umsebenzi wokuvuselela izakhiwo okwengeziwe enkundla
Konke lokhu kwathuthukiswa nenjongo eyodwa: ukuba izakhamuzi zedolobha ufuna ukubona football yabo club e elite football Russian. Kodwa kwakungelula ngakho. Uqinisile Ngemva konyaka, "Gazovik" Beshiya division lokuqala. Kwakubonakala sengathi izimali ezitshaliwe ekwakheni kabusha ziye esichithekayo.
Kodwa Orenburg ifakwe bakholwa nethimba lakhe. Ngo-2013, iqembu wabuyela division lokuqala, futhi ngawo lowo nyaka won ithikithi kuya National Football League. Futhi kuba sobala ukuthi le nkundla "Gazovik" (Orenburg), ogama umsebenzi wokuvuselela izakhiwo iye ngokuphindaphindiwe kwenziwe, hhayi ilungele iqembu Take-off ezinjalo. Lapho ukuthi collective ubeka ngisho bawele wokuvelela ngaphezulu.
Kusukela 2014 uqala mali olusha ngowezi-ngenkundla yezemidlalo, "Gazovik" (Orenburg). Ukwakhiwa kabusha manje kwenziwe ngezigaba. Kwaphela iminyaka emithathu enkundleni uthola a look zanamuhla. Ithimba eya Premier League of the football Russian. Futhi manje wonke abalandeli bezemidlalo bayakujabulela ukuza "Gazovik" inkundla (Orenburg). Ukwakhiwa kabusha (olusha izithombe ukwakhiwa ubona lapha) manje ikuvumela ukuthola izivakashi ensimini yakhe ezingeni eliphezulu.
Wawusho ukuthini kabusha enkundleni?
Abaningi, ngibona enkundleni, ubone ukuthi kuyinto efanayo kakhulu eMoscow nkundla "Khimki", okuyinto ngokuvamile ukudlala CSKA Moscow, futhi "Dynamo". Okuwukuphela umehluko - inani lezihlalo enkundleni. It unqabile ngemuva kabusha, kodwa kwakukhona VIP-izihlalo nophahla. Kwathiwa isuswe athletics ithrekhi futhi waba into luyingxenye football. Konke lokhu kuchaza ukuthi le nkundla "Gazovik" (Orenburg), ukwakhiwa kabusha okwenziwa ngokuhambisana nezidingo UEFA, ibhola kungenzeka ukumelela iRashiya enkundleni ngamazwe. Futhi izakhamuzi zedolobhakazi lokuthi maduze ngeke kuphela bakwazi ukubona best football amaqembu kuleli zwe, kodwa futhi amakilabhu esuka eYurophu.
Uma sikhuluma usayizi inkundla ke luncane e-Premier League, kodwa uma ubheka khona inkundla, kuba omunye okungcono. Ukuze uthole "Gazovik" inkundla (Orenburg), ogama kheli bonke abalandeli Orenburg ezaziwayo, kufanele sinake ekhadini. Ukwakheka itholakala n. Rossosh phezu Boulevard anemibala 31.
Ibanga ukusuka edolobheni enkundleni incane. Futhi ungathola ukuthi kuvele ngenombolo ibhasi 56. Kulabo abafuna ezisheshayo futhi ezilula ezingasetshenziswa ukuze enkundleni, ungakhetha itekisi. Ngakho-ke, noma imuphi umhlali noma isivakashi kalula uvakashela webhola enkundleni elilungisiwe "Gazovik".
Aleksandr Gladky: ezithakazelisayo mayelana football futhi hhayi kuphela
Boris Rotenberg: football biography
Soslan Gatagov: Biography
Footballer Daniel Alves: engcono wasemuva wesimanje Kwesokudla
Toilet imiganu nge mpo esidayisa: umehluko kanye nezinzuzo
Umthwalo Electronic ngezandla zabo: isikimu. Homemade electronic umthwalo FET
Iyini ishilling? Incazelo yegama, umlando
"L'Oreal Mazhirel": Iphalethi shades kulabo ukwazisa ubuhle
Uma ingane ilale nabazali, indlela wean kuye kuwo? imithetho eyisisekelo
"I-Rosa Khutor" yi-ski resort yaseRussia. Uhlelo lwemizila "Rose Farm" kanye nokuyinkimbinkimbi kwemizila
Tattoos for girls ku ikhaba: Khetha sibalo